फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - अन्डा युद्ध
अन्डा युद्ध जोनाथन स्विफ्ट
ब्लेफुस्क्युका केही मन्त्रीगण पनि लिलिपुट आए । मैले उनीहरूसँग केही कुरा गरें । उनीहरूले पनि मलाई उनीहरूको मुलुक घुम्न आउनका लागि निम्तो दिए । मैले निम्तोका लागि उनीहरूलाई धन्यवाद दिएँ अनि सम्राट्सँग ब्लेफुस्क्यु घुम्न जानका लागि अनुमति लिने विचार गरेर भनें – “ब्लेफुस्क्युका मन्त्रीहरू मलाई उनीहरूको मुलुक घुम्न जाऔं भन्दैछन्, के मलाई अनुमति छ सम्राट् ?”
जवाफ दिनुअघि सम्राट्ले बडो बेवास्तासाथ मलाई हे¥यो र भन्यो – “हुन्छ जान सक्छौ !”
म त्यस सम्राट्को मप्रतिको चिसोपन देखेर छक्क परें । मलाई त हामी दुवै असल मित्र हौं भन्ने पो लागेको थियो । उसलाई फेरि सहयोग गर्नका लागि मलाई चाँडै नै एउटा सुअवसर मिल्यो । एक रात म मस्त सुतिरहेको थिएँ । मध्य रातमा ठुलो खैलाबैला सुनेर ब्युँझें । थुप्रै मान्छेहरू कल्याङमल्याङ कराइरहेका थिए अनि मलाई पनि बोलाइरहेका थिए । सम्राट्का केही मन्त्रीहरू मकहाँ आए र मलाई दरबारमा ठुलो आगलागी भएको जानकारी गराए । यो सुनेर म दरबारतिर दौडिँदै गएँ । जताततै आगो आगो रहेछ, धेरै मानिसहरू आगो निभाउन बाल्टीका बाल्टी पानी खन्याउँदै थिए तर आगो भने झन् सङ्ग्रालिँदै गइरहेको थियो । यसले सबै दरबार सखाप पार्ने सङ्केत गरिरहेको थियो । त्यही बेला मलाई एउटा राम्रो उपाय सुझ्यो ।
मैले त्यस साँझ भक्कु वाइन धोकेर सुतेको थिएँ । मेरो पालो आगलागी हुँदै गरेको दरवारमाथि पिसाब फेर्न थालें । पिसाबले त दरबारमा लागेको आगो सबै झ्यापझुप्पै निभ्यो । मेरो त्यस कार्यले दरबार भष्म हुनबाट जोगियो । म मैले गरेको त्यस कार्यबाट निकै खुसी पनि थिएँ ।
त्यसपछि पो मैले झट्ट सम्झें त्यस लिलिपुट राज्यको महत्वपूर्ण एउटा नियमबारे ! त्यस कानुनले दरबार परिसरभित्र पिसाब गर्नु एउटा मृत्युदण्डयोग्य अपराध मान्दथ्यो । अब भने मलाई बडो चिन्ता लाग्यो, तर त्यस सम्राट्ले मलाई एउटा सन्देश पठाएछ । उसले सन्देशमा मैले गरेको त्यो अपराधलाई क्षमा गर्न न्यायालयमा आदेश पठाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको रहेछ । मैले पछिबाट थाहा पाएँ सम्राज्ञी चाहिँ मैले गरेको अपराधका कारण ज्यादै रिसाएकी रहिछे । यसै कारण मलाई घृणा गर्न थालिछे । उसले कहिल्यै दरबार पनि नफर्कने निर्णय गरेकी रहिछे ।
गुलिभरको भ्रमणबाट अनु. : गंगाप्रसाद अधिकारी